Norvezy - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Vao haingana, Shiryaev dia any Norvezy, ary koa ny momba ny instagram nanao sonia tena olona vitsivitsy, aho hizara aminareo ireo sary sy tantara eto amin'ny tsara indrindra travel blog sehatra amin'ny AterinetoFa raha tsy vazivazy, te-hitaona ny fanahinareo mba handeha sy hizara tetika Norvezy ny mangatsiatsiaka, ny mendrika ny fitsidihana. Eo amin'ny toerana voalohany lavitra no nanao izay azo atao noho ny ultra-cheap sidina low-cost zotram-piaramanidina. Rehefa nifindra tany Polonina, nisafidy ny hiaina Gdansk manokana, satria io no be ny seranam-piaramanidina, ary lafo ny toerana mandeha. Matetika izy ireo no handamina ny fivarotana ny discounted tapakila ho an'ny amby roa-polo misoratra anarana any amin'ny gazety tsy mba malahelo.
Iray amin'ireo fivarotana, isika dia nividy tapakila ho any an-tanàna, izy ireo cost antsika momba ny fito amby roa-polo robla (tahan'ny fifanakalozana ao ny daty nanoratana) tsirairay.
Raha toa ka tsy manana tanjona mba mandany eo ho eo Lefitry ny karama nandritra ny herinandro naharitra ny fitsidihana, ny trano fandraisam-bahiny mba hijery dia tsy mendrika na dia izany (ny vidin-javatra any Norvezy isika dia hiverina), ary mety tsara ny safidy dia vitsy. Norvezy dia ny fanapariahana ny firenena, manamorona ny fjord, mivelatra eny an-jatony sy an'arivony kely fiaraha-monina, ny olana dia ny hahazo zavatra iray ihany no hanao ny lalana izay ahitana maro famindrana fiara fitateram-bahoaka ary ny roa ferries.
Tamin'ny voalohany ny drafitra dia mba hiala Alesund, fa ny toe-karena dia toy izany fa izany dia mora kokoa, ary mora kokoa ny mahita trano ao amin'ny tanàna, noho ny handany vola sy fotoana eo amin'ny lalana.
Isika namandrika an-trano ao am-Ålesund nitodika sivy amby efa-polo isan-alina sy ny fitambaran'ny ho an'ny herinandro lavitra telo-polo amby efatra arivo roubles. Ny zavatra tsara dia niara-nandeha izy, dia afaka namaky ny vola amin'ny tapany. Tamin'ny taon-dasa ho ahy mafy, ary ao amin'ny vanin-taona mafana dia azo ny fahazoan-dalana honina (sy ny fahafahany mandeha any ivelany). Avy hatrany aho te ho any any ho any ny Avaratra tiako-Pianakaviana natiora. Izany dia mendrika ny holazaina ny teny vitsivitsy ny momba ny vidin-javatra any Norvezy. Nandre izany dia tena lafo, fa mandra-tonga, angamba, no tsy hahatakatra ny fomba lafo vidy izany. Shawarma robla, mofo roa-polo paoma sy ny telo-polo robla isan-kilao. Amin'ny Ankapobeny, ho any amin'ny tany Polonina dia superdorogo. Norvezy dia firenena iray eo ho eo ny karama ny roa arivo amby roa-polo taorian'ny hetra.
Tsara, tsy handany ny teti-bola kely ny zavatra tanàna ho an'ny sakafo tamin'ity herinandro ity, isika nandray ny anarana dikan 'ny vovoka izay tsy maintsy ho levona ao anaty rano, ary dia, afaka manolo rehetra ny sakafo, misy ny mahay mandanjalanja sangan' asa.
Ny lohatenin'ny sary ny lahatsoratra fotsiny avy
Kokoa ny entana Nentiko niaraka tamiko avy tany Polonina cost roa-polo roubles. Eo anatrehanao hiala an-tongotra, dia nihinana ny fitsipika anjara ary hitondra izany miaraka aminy mbola eo ranon-javatra kaloria izany dia ampy nandritra ny ora maro ny Tongotra. Raha mandeha filasiana tena mahalana, buy ny tenanao sneakers mpizaha tany tantera-drano zavatra tendrombohitra dia tsy tsara tarehy mitady karazany, fa avy ao anaty rano. Iray amin'ireo mpandray anjara ny dianay nankany Mihazakazaka sneakers ary tena nanenina satria izy ireo no mahazo lena efa ho dimampolo metatra miala mianoka amin ny havoana iray monja mitandrina ny dingana.
Talohan'ny lavitra nieritreritra aho hoe,"Inona no maha samy hafa ny fomba taloha dia ny kiraro, raha mandalo ny tendrombohitra tany Norvezy", nefa mbola nandeha decathlon ary nividy ny fototra modely Kiraro ho an'ny Tongotra.
Tsy maintsy hoe, ity ny fampiasam-bola tsara indrindra nandritra ny lasa. Kiraro, hanampiana izany koa, dia tanteraka ny tena tantera-drano. Tsy hamerina ny fahadisoana sy ny buy, ary razmeshivaya kiraro vaovao farafahakeliny herinandro iray mialoha ny diany. Ny tombony avy amin'ny vadiny. Raha handeha any ho any ny andro samy hafa avy amin'ny manodidina ka tsy fantatrao izay akanjo mba ento miaraka aminao, misokatra ny fikarohana ny toerana Instagram sy hahita izay ny olona no manao. tanàna kely amin'ny efa-polo amby roa arivo ny olona any amin'ny morontsiraka Andrefana ao Norvezy. Manokana ny maritrano ao an-tanàna ao amin'ny fomba Kanto Nouveau nipoitra taorian'ny afo izay saika rava ny tanàna manontolo ao amin'ny sivy ambin'ny folo. An-tanàna no indray ary ny ankamaroan ny trano sivy ambin'ny folo-sivy ambin'ny folo. Ao amin'ny afo, araka izay an'arivony ny olona no tsy manan-kialofana, nahafatesana olona iray. An-jatony vitsivitsy dingana sy ny fandinihana ny tokotanin-tsambo, izay manome ny fomba fijeriny ny tanàna. Teny an-dalana ny dabilio apetraka ao ny hariva tohatra dia nanasongadina, amin'ny Ankapobeny, na inona na inona mahatonga anao hanadino izay firenena ny fari-piainana ianao. Efa-polo alina ny vahoaka, tsy dia maro ireo fiara eny an-dalambe, dia nivory tany samy hafa farantsa.
Alohan'ny handeha ho hitanao amin'ny manaraka ny sary, sary an-tsaina ny fomba ahoana no mba hitana na inona na inona havokavoka farantsa eny an-dalambe (elo, ohatra) dia nahita? Avy amin'ny ny fiandohan ny diany, dia te-hanoratra ny sasany funny jokes mifandraika amin'ny vidin-javatra sy ny karama any Norvezy.
Ohatra, rehefa nangataka ny miaramila, tsara ny Aterineto, satria isika dia mila finday ho an'ny asa, dia namaly izy hoe: fa izy efa nanana ny router (lafo indrindra, mazava ho azy) dia mahagaga. Na, ohatra, mikasika ny fampiharana amin'ny sarintany ny Norvezy amin'ny fidirana ho anao no nihaona tamin'ny sora-baventy izay manome ny misintona ny ivelan'ny aterineto dikan-tenin'ny karatra"ho robla dia mora kokoa noho ny taratasy sarintany". Fa any Norvezy dia tsy mivazivazy, ka noho izany aho, tsy misy intsony ao. Fa voasoratra, izay ny Norwegians manaiky rehefa Dennis dia tsy afaka mandoa ny saran-dalana karatra momba ny fiara fitateram-bahoaka izy, dia nandeha maimaim-poana. Rehefa niverina tany mando avy any an-tendrombohitra, ary nisy nipetraka teo amin'ny baka pier tao amin'ny efi-trano manokana ho an'ny miandry (amin'ny famerana mari-pana, ny heater sy ny trano fidiovana), baka kapiteny dia nanasa antsika ny sambo, ka isika no tsy nanantena ho an'ny hafa ny ora, ary namely tany amin'ny lalana mifanohitra amin'ny lafiny hafa ny nosy, ary ny mpiasa momba ny ferry nanao antsika dite mafana. Ary tamin'ny andro faharoa nanapa-kevitra izahay ny mba miakatra ny iray amin'ireo tendrombohitra akaiky izao aho mpankafy ny Tongotra (sy vazivazy Dennis, fa tena mpankafy ny vazivazy Dennis efa ela be). Ny toetry ny fjords sy hantsam-bato fotsiny mahatahotra. Kely any Andrefana, ary ny ranomasina dia manomboka. Rahona ny andro no tonga lafatra jiro ho an'ny sary. Teny an-dalana, mitantana akaikin'ny Hoalan'i renirano. Ao am-Ålesund na inona na inona atao mihoatra ny roa andro, raha tsy hoe angaha ianao tonga teo an-tendrombohitra, raha ny marina, mandritra ny herinandro isika dia, I.
ny Farany dimampolo metatra ambonin'ny haavon'ny ranomasina.
Tsy feo tena mahatalanjona, saingy ny tena marina izany dia noho izany.
Hihaona vehivavy Tao Izmir: Fisoratana anarana Maimaim-poana
Russian roulette ing chatting online
Chatroulette avy amin'ny finday maimaim-poana video Mampiaraka toerana maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana mahazatra ny maso phone amin'ny chat roulette lahatsary amin'ny chat amin'ny chat roulette an-tserasera avy amin'ny finday maimaim-poana Mampiaraka ny tovovavy mba hitsena ny vehivavy ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny tovovavy taona video internet mpivady ny lahatsary amin'ny chat roulette